Kenya Oo Sheegatay In Ay Fashilyeen Weerara Kimika Ah Oo Ururka Khilaafada Islaamka Ee Dalkaasi Diyaar Gareeyeen In Ay Qaadaan
Home	Wararka Af Soomaaliga Ah	Soomaaliya	Somaliland	Khaatumo State	Puntland	Galmudug State	Jubbaland	Koofur Galbeed	Caalamka	Waraysiyadda	Qubanaha Heemaal	Caafimaadka	Top Video	Caayaraha	English News	Arimaha Bulshada	Barashada Diinta Islaamka	Contact Us	You are here: HomeArimaha BulshadaCaalamka
Kenya Oo Sheegatay In Ay Fashilyeen Weerara Kimika Ah Oo Ururka Khilaafada Islaamka Ee Dalkaasi Diyaar Gareeyeen In Ay Qaadaan	Wednesday, 04 May 2016	Caalamka
Kenya, ayaa waxay sheegtay inay fashilisay weerar ay damacsanaayeen inay dalkeeda ka gaystaan shakabad ku xiran Ururka Daacish, oo is ku magacaabay Dowladda Khilaafada Islaamka. Kenya ma sheegin magaca shabakadaasi.
Booliska Kenya, ayaa waxay xabsiga dhigeen haweeney iyo saygeeda iyo haweeney kaloo labaad, iyadoo dhinaca kalana ay abaalmarin lacageed duldhigtay laba nin oo kale, isla-markaana baxsad ah.
Bayaan uu soo saaray Taliska Booliska Amisom, ayaa waxaa lagu sheegay in xabsiga la dhigay Mohammed Abdi Ali, oo tababar caafimaad u joogay isbitaal ku yaala Kenya, waxaana loo xiray ku lug lahaanshaha shabakad argagaxiso, oo qorsheynaysay inay Kenya ka gaysato mid lamid ah weerarkii Westgate oo kale.
Bayaanka, ayaa lagu sheegay in ninkaasi uu ku hawlanaa falal xagjirnimo ah, sidoo kalana uu arday Kenyan ah ka caawiyay inay ku biiraan Xoogaga Daacish, ee ka dagaalama Libya iyo Suuriya.
Afada ninkan oo lagu magacaabo Nuseiba Mohammed Haji, ardayadna ah, ayaa sidoo kale Bayaanka lagu sheegay in lagu xiray dalka Uganda, waxaana lala soo xiray saaxiibteed oo lagu magacaabo Fatuma Mohammed Hanshi.
Shabakadan ku xiran Ururka Daacish, ayaa sida lagu cadeeyay Bayaanka wuxuu yoolkeedu ahaa inay weerarkaasi u adeegsado jeermiska dilaaga ah ee Anthrax.
Bayaankan, ayaa waxaa lagu xusay in Mohammed Abdi Ali ay fal dembiyeedkaasi ku wehlinayeen laba nin oo kale, kuwaa oo la la’yahay, balse waxaa magacyadoodu lagu kala sheegay Ahmed Hish iyo Farah Dagane.
Booliska, ayaa waxay ballanqaadeen in 9,900 oo lacagta Mareykanka ah, ay abaalmarin u siin doonaan cid kasta oo ka caawisa soo qabashada Farah Dagane iyo Ahmed Hish.
Taliska Booliska Kenya, ayaan kala cadayn halka ay shabakadaasi qorsheynaysay inay weerarka ka gaysato iyo weliba xilliga lagu asteeyay, marka laga soo taggo inay damacsaneyd weerar ay ka fuliso gudaha Kenya.	More in this category:
« Maamulada Galmudug Iyo Ismaamulka Soomalida Ethopia Oo Ka Heshiiyey Dagaal Dhex Maray Afkana Ka Xidhay Dadkii La Xauuqay	Dawalada Austraila Oo Ka Hor Joogstay Ehelka Gabadh Is Gubtay In Ay Ku Booqdaan Isbitaalka Magaalada Brisbane »